mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulMaitiro Ekuwedzera anopesana neIETT Metrobus Tsaona
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, GENERAL, HIGHWAY, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metrobus, TURKEY 0
Zvimwe zviyero zvinopesana ne metrobus tsaona
Kunyangwe kuderera kukuru kwe2019 mune tsaona dzeMetrobus, IETT yaita ongororo nyowani panjodzi mbiri dzichangobva kuitika. Musoro weKuongorora Bhodhi wakapihwa pachako kuti aongorore tsaona idzi. Nyanzvi yakakumbirwa kubva kuChamber of Mechanesa Majini.
Metrobus, iyo inofamba 7 zviuru zvine zviuru pazuva ne220 zviuru zvemakiromita uye inotakura vapfuuri ve1 mamirioni, iri kuita mabasa makuru kudzivirira tsaona. Mushure me tsaona paMetrobus mutsara munaGumiguru, 6 uye 8 IETT manejimendi yakaungana kuti itarisezve. Mutevedzeri weManeja Mukuru weIETT Hamdi Alper Kolukısa akatungamira musangano, zvakakonzera tsaona metrobus tsaona uye matanho akurukurwa. Pamwe chete nevakuru vemapazi, vese ma maneja akakodzera eIETT vakapinda musangano uyu.
Mutevedzeri wemaneja General Kolukısa akataura kuti kuongorora kwakadzama kwakatangwa nezvekwaive tsaona uye nekutaura kuti Musoro weDare Rokuongorora wakapihwa pachavo mukuferefetwa kwenyaya. Kolukısa, iyo Chamber of Mechanical Injinier zvakare inoda nyanzvi, akawedzera.
Munguva yemusangano, vatyairi pamwe nevatyairi vemotokari dzaimboshandiswa zvaikurukurwawo. Mukati mehurongwa uhu, kwakatemerwa kufanoongorora kudzidziswa kwakapihwa vatyairi pakutyaira zvine hutano uye kutora migawo yavo munjodzi.
Istanbul Metropolitan Municipality, tsaona metrobus yakaitika mushure mekunge matanho awedzerwa, tsaona dzakadaro kuitira kudzivirira "Yekutanga Yambiro System" yakatanga kuiswa mukushanda.
Nekuda kweizvozvo matanho anotorwa, maererano neIETT data, huwandu hwetsaona pamutsetse huri kuwirawo. Huwandu hwetsaona nemakore hwunotevera:
Mitsva mitsva inopesana neTCDD, kufa kwevanhu nemhuka kupinda muzvitima. 22 / 03 / 2012 Inorongwa kuchengetedza kurasikirwa kwehupenyu nenguva nenguva nekuda kweboka rekudzivirira rakaumbwa kumativi ezvakagadzirirwa neTCDD. TCDD 1. Maererano nemashoko akawanikwa kubva kune Regional Regional Directorate vakuru, panhizha fence system inoshandiswa kumativi eiri kunze kwekupfuura kwemazinga. Mukuwedzera kune kuvandudzwa kwezvitima nekongorara vavete maererano neInternational Railway Association maonero, TCDD iri kutarisira kuchengetedzwa kwenharaunda yezvitima. Nenzira iyi, inotarisirwa kudzivirira kufa kwevanhu nemhuka kubva pakupinda mumigwagwa nguva nenguva. MuEdirne, nzvimbo inonyanya kupiwa kune nzvimbo dzekugara dzedambo dzinoenderera mberi kubviswa. Mapoka aya anoramba achiedza kuwedzera kuchengetedza kwemafambisi emigwagwa munzvimbo dzakasarudzwa.
Nzira dzepamusoro-soro dzepakati dzinochera ngozi 10 / 01 / 2012 Vongai zviyero zvakatorwa mugore rekupedzisira re10, nhanho dzinokwira yepamusoro uye nhamba yevakafa uye yakakuvara muzviitiko izvi yakaderera zvikuru. Muchiitiko ichi, 78 muzana yehuwandu hwezviitiko pamwero wekutengesa, 15 muzana yeavo vakarasikirwa noupenyu hwavo uye 50 muzana yevakakuvadzwa vakaderedzwa. Maererano neTCDD yeHem Level Crossing Report Kaz, njodzi dzepamusoro-soro dzinoderedzwa nhamba, asi semugumisiro, dziri pakati pezvinetso zvakakosha zveTCDD. Maererano nehuwandu hwevanhu, 600 vanhu vanofa gore negore mumatambudziko ekudarika kwemukati muEurope. Maererano neInternational Union of Railways (UIC), 95 ndiyo inotarisira vashandisi vemugwagwa Yüzde
Nhanho Dzakatorwa Kupikisa Fuzi Kupinza 26 / 12 / 2012 Tsika uye Trade Gurukota Hayati Yazici, ichiti pane kupomba mukupara nechitsotsi akagadzirira mitemo gwaro kuitira kudzivirira nechitsotsi peturu yose dzisina kuti chisimbiso, "Ndinotenda kuva mutemo akagadzirira gwaro mutemo pamwe kupinda simba ramangwana zvokusvika kupererwa nemafuta nechitsotsi. With bhiri iri, indasitiri wacho zvikuru zvakasimba dzinodzorwa kuti, kuvandudza kuti makwikwi richava rinokosha nhano kurutivi kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye utano hwevanhu, "akadaro. Tsika uye Trade Gurukota Hayati Yazici, TOBB, akaudza zviyero kutora huni nechitsotsi nekuronga venhau musi Social Facilities. 2012 / 19 pamwe Prime Choushumiri Circular No. urongwa inokosha mukurwisa huni nechitsotsi oparesheni zvichiratidza kuti gurukota Hayati akaita ...
Metrobus system muNew Delhi yakaunza vapfumi uye varombo 11 / 07 / 2012 Ko mhinduro vakauya kuna Turkey zvokufambisa, kana Implementation pamusoro aienda rwemotokari Lanes nokuda yokuwandisa, uyewo vaya kuchovha ari Metrobus pasi kukurukurwa havagutsikani chaizvo, uyewo akatungamirira boka kuparapatika India. gutsaruzhinji kupfuura vazhinji munyika, India kuti guta Metrobus zvakafanana nezvifambiso zvinosvika yokuwana chingapedza motokari zvinetso New Delhi, mumwe muridzi motokari private vakauya kuzorwa rezasi uye pakati mari vemo anoshandisa zvifambiso pamwe nevapfumi. Iyo OH Bus Fast Transit olan (OHT) corridor, iyo yakakonzera kukakavadzana kwakakura kubva pakupera kwayo mu 2008, ikozvino yava nyaya yedare pamusoro pekushandiswa kwevadzidzisi vemotokari yega. Nyaya yekutanga inokosha İlk
Mitsva mitsva inopesana neTCDD, kufa kwevanhu nemhuka kupinda muzvitima.
Nzira dzepamusoro-soro dzepakati dzinochera ngozi
Nhanho Dzakatorwa Kupikisa Fuzi Kupinza
BTS, TCDD haigoni kupesana nezviitiko
Akatungamira Traic Signaling Sistimu Kupesana neNjodzi muTaso
Zvimwe kuMetrobus kubva IETT yakatanga 3 line
Metrobus tsanangudzo kubva kuIETT
Metrobus hike tsanangudzo kubva kuIETT